Wzọ 13 na-eme ka ọdịnaya dị na ntanetị | Martech Zone
Otu ezigbo enyi kpọtụrụ m n'izu a ma kwuo na ya nwere onye ikwu nwere saịtị nke na-enweta okporo ụzọ dị mkpa ma ha chọrọ ịhụ ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ isi akpata ego na ndị na-ege ntị. Azịza dị mkpirikpi bụ ee.
Achọrọ m ibido na pennies… wee rụọ ọrụ n'ime nnukwu ego. Buru n'uche na nke a abụghị ihe niile gbasara itinye ego na blọgụ. O nwere ike ịbụ ihe onwunwe dijitalụ ọ bụla - dị ka nnukwu listi ndị debanyere aha email, nnukwu nnukwu ndebanye aha Youtube, ma ọ bụ mbipụta dijitalụ. Ọwa ọhaneze adịghị mma yana a na-ahụkarị ha ka ha nwere ya site na ikpo okwu karịa akaụntụ ahụ chịkọtara ihe ndị a.
Lezienụ kwa Pịa Mgbasa ozi - ọtụtụ afọ gara aga, ihe ngosi m lere na mmemme a kpọrọ ndị a ngwọta nke onye nkwusa ọdịmma webmaster. Ọ bụ usoro kachasị mfe iji mejuputa - naanị itinye ụfọdụ edemede na ibe gị yana ụfọdụ oghere ad. A na-agwa oghere ndị ahụ wee gosipụta ọkwa mgbasa ozi kachasị elu. Naghị enweta ego ọ bụla, agbanyeghị, belụsọ na agbasoro mgbasa ozi ahụ. N'ihi mgbasa ozi-igbochi na izugbe mgbasa ozi na mgbasa ozi n'ozuzu, pịa-site na ọnụego na mgbasa ozi na-anọgide na-adaba… dị ka ego gị.
Omenala Mgbasaozi Neti - netwọọdụ mgbasa ozi na-abịakwute anyị n'ihi na ha ga-enwe mmasị ịnweta ngwa ahịa nke saịtị nke oke a nwere ike inye. Y’oburu na m buru ndi n’azu ahia, M nwere ike ibanye na ohere a. Mgbasa ozi ahụ jupụtara na pịa-azụ ma na mgbasa ozi dị egwu (achọpụtara m n'oge na-adịbeghị anya a ero mkpịsị ụkwụ na saịtị ọzọ). M na-ewepu netwọkụ ndị a oge niile n'ihi na ha anaghị enwekarị ndị mgbasa ozi dị mkpa maka ọdịnaya na ndị na-ege anyị ntị. M na-enye ego? Chọpụta… mana m na-aga n’ihu itolite ndị na-ege ntị dị egwu nke na-eme ma na-anabata mgbasa ozi anyị.
Mgbakwunye Mgbasa ozi - nyiwe dika Commission Junction na shareasale.com nwere ọtụtụ ndị mgbasa ozi dị njikere ịkwụ gị ụgwọ iji kwalite ha site na njikọ ederede ma ọ bụ mgbasa ozi na saịtị gị. N'ezie, njikọ Share-A-Sale m kesara bụ njikọ njikọta. Jide n'aka na ị na-ekpughe iji ha na ọdịnaya gị - ịghara igosipụta nwere ike mebie iwu gọọmentị etiti na United States na gafere. Usoro ndị a na-amasị m n'ihi na m na-edekarị banyere otu isiokwu - mgbe ahụ, m na-achọpụta na ha nwere mmemme mgbakwunye nke m nwere ike itinye maka. Kedu ihe kpatara na agaghị m eji njikọ njikọta karịa nke naanị ya?
Mee N'onwe Gị Neti Neti na Njikwa - site na ijikwa ngwa ahia gi na ichota onu ahia gi, inwere ike iji ebe ahia ahia ebe gi na ndi mgbasa ozi gi g’enwe mmekorita nke oma ma gha aru oru iji nweta oganihu ha n’iru inweta ego gi. Anyị nwere ike ịtọ ọnụ ala kwa ọnwa, a na-eri kwa echiche, ma ọ bụ a na-eri kwa click na a n'elu ikpo okwu. Usoro ndị a na - enye gị ohere mgbasa ozi mgbasa ozi - anyị na - eji Google Adsense maka nke ahụ. Ha na-ekwe ụlọ mgbasa ozi ebe anyị nwere ike iji mgbasa ozi mgbakwunye dị ka ndabere.
Mgbasa Ozi Obodo - Aghaghị m ịgwa gị na nke a na-eme m ụjọ. Inweta ugwo iji bipute otu ederede, pọdkastị, ihe ngosi, iji mee ka ọ dị ka ọdịnaya ndị ọzọ ị na - ewepụta dị ka ọ bụ akwụwaghị aka ọtọ. Ka ị n’etolite mmetụta, ikike gị na ntụkwasị obi gị, ị na - abawanye uru dijitalụ gị nwere. Mgbe ị gbanwere ihe onwunwe ahụ ma ghọgbuo azụmaahịa ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa n'ime nzụta - ị na-etinye ihe niile ị rụsiri ọrụ ike iji mepụta ihe egwu.
Ugwo Links - Dika ọdịnaya gi ritere ihe njin ọchụchọ, ndi SEO ga achoro gi na ulo oru SEO nke choro ichoghachite na saiti gi. Ha nwere ike ịpịpụta jụọ gị ole ị ga-etinye njikọ. Ma ọ bụ ha nwere ike ịgwa gị na ha chọrọ ide edemede na ha bụ nnukwu ndị na-akwado saịtị gị. Ha na-agha ụgha, na-etinyekwa gị n'oké ihe ize ndụ. Ha na-arịọ gị ka ị mebie usoro ọrụ nke Search Engine na nwedịrị ike ịrịọ gị ka ị mebie iwu gọọmentị site na ịghara igosipụta mmekọrịta ego. Dị ka ihe ọzọ, ị nwere ike monetize gị njikọ site na njikọ monetization engine dị ka VigLink. Ha na-enye ohere iji gosipụta mmekọrịta ahụ n'ụzọ zuru ezu.
Mmetụta - Ọ bụrụ na ị bụ onye ama ama na ụlọ ọrụ gị, enwere ike ịchọ gị site na nyiwe mmetụta na ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze iji nyere ha aka ịkwupụta ngwaahịa na ọrụ ha site na isiokwu, mmelite mgbasa ozi mmekọrịta, webinars, okwu ihu ọha, pọdkastị, na ndị ọzọ. Marketingre ahịa azụmaahịa nwere ike ịba ezigbo uru mana buru n'uche na ọ ga-adịgide naanị ogologo oge ị nwere ike imetụta ahịa - ọ bụghị naanị iru. Ọzọkwa, jide n'aka na ị ga-ekpughe mmekọrịta ndị ahụ. Ahụrụ m ọtụtụ ndị na-eme ihe ike na ụlọ ọrụ nke m nke na-anaghị agwa ndị folks na a na-akwụ ha ụgwọ ịkwado ngwaahịa na ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Echere m na ọ bụ emeghị ihe n'eziokwu na ha na-etinye aha ha n'ihe ize ndụ.
nkwado - Ikpokoro ahia anyị na-enyekwa anyị ohere idowe ụlọ mgbasa ozi ma kwụọ ndị ahịa anyị ụgwọ ozugbo. Anyị na ụlọ ọrụ na-arụkarị ọrụ iji mepụta mkpọsa na-aga n'ihu nke nwere ike ịgụnye webinars, pọdkastị, infographics, na akwụkwọ akụkọ ọcha na mgbakwunye CTAs anyị na-ebipụta site na oghere mgbasa ozi ụlọ. Ihe dị ebe a bụ na anyị nwere ike ịbawanye mmetụta na onye mgbasa ozi ma jiri ngwá ọrụ ọ bụla anyị nwere iji kpalite uru maka nkwado nke nkwado.
referrals - Uzo nile di ugbua nwere ike idozi ma obu di ala. Cheedị iziga onye ọbịa na saịtị, ha zụrụ ihe $ 50,000, ma ị mere $ 100 maka igosipụta oku na-eme ma ọ bụ $ 5 maka pịa-site. Ọ bụrụ na kama, ị kpara nkata ọrụ 15% maka nzụta, ị gaara eme $ 7,500 maka otu nzụta ahụ. Ntugharia siri ike n'ihi na ịchọrọ ịgbaso ụzọ ahụ gaa na ntụgharị - nke a na-achọ peeji ọdịda na isi mmalite nke na-eme ka ndekọ ahụ gaa na CRM na ntụgharị. Ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu aka, ọ nwekwara ike were ọnwa na-emechi… ma ka bara uru.
Consulting - Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere mmetụta na nwee nnukwu ọdịnaya na-eso, ị nwere ike bụrụkwa onye ọkachamara achọpụtara n'ọhịa gị. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ego anyị na-enweta kemgbe ọtụtụ afọ anọwo na-agba izu ahịa, ahịa, na ụlọ ọrụ teknụzụ banyere otu esi etolite ikike ha ma tụkwasị obi n'ịntanetị iji debe ma bulie azụmaahịa ha.
Ihe - I wulitela ndị na-ege gị ntị nwere ike ịnabata onyinye gị why yabụ, gịnị mere ị ga-eji wee zụlite mmemme klaasị nke na-eme ka ndị na-ege gị ntị na-anụ ọkụ n’obi bụrụ obodo na-asọ asọ! Ihe omume na-enye ohere ka ukwuu iji monetize ndị na-ege gị ntị yana ịchụpụ ohere nkwado dị ukwuu.
Ngwaahịa gị - Ọ bụ ezie na mgbasa ozi nwere ike ịmepụta ụfọdụ ego na ịgba izu nwere ike ịpụta nnukwu ego, ha abụọ nọ naanị ebe onye ahịa ahụ nọ. Nke a nwere ike ịbụ ihe dị egwu nke mgbago na mgbada dị ka ndị mgbasa ozi, ndị nkwado, na ndị ahịa na-abịa ma na-aga. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị nkwusa ji na-eresị ha ire ngwaahịa ha. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa na mmepe ugbu a iji nye ndị na-ege anyị ntị (chọọ maka mmalite ụfọdụ n'afọ a!). Uru ị na-ere n'ụdị ụdị ntinye aka na ndenye aha bụ na ị nwere ike ịba ụba ego gị n'otu ụzọ ahụ ka ị na-eto ndị na-ege gị ntị at otu n'otu oge na, na-agbasi mbọ ike, ị ga-enweta ụfọdụ ego dị mkpa na-enweghị onye ọ bụla na-etiti ha. .
n'ihi Sale - A na - azụta ngwa ahịa dijitalụ na - arụ ọrụ nke ọma site na ndị na - ebi akwụkwọ dijitalụ. Zụta ihe onwunwe gị na-enyere ndị na-azụ ahịa aka ịbawanye ohere ha ma nweta ohere karịa netwọkụ maka ndị mgbasa ozi ha. Iji mee nke a, ịkwesịrị itolite ọgụgụ akwụkwọ gị, njigide gị, listi ndenye email gị, yana okporo ụzọ ọchụchọ ọchụchọ gị. Zụta okporo ụzọ nwere ike ịbụ nhọrọ maka gị site na ọchụchọ ma ọ bụ na-elekọta mmadụ - ọ bụrụhaala na ị na-ejigide akụkụ dị mma nke okporo ụzọ ahụ.
Anyị emeela ihe niile dị n'elu wee na-achọ n'ezie itinye ọnụego anyị site na # 11 na # 12. Ihe abụọ ahụ ga - eme ka anyị bụrụ ndị na - azụ ahịa ozugbo anyị niile na - agba ọsọ. Ọ karịala afọ iri anyị bidoro ma ọ nwere ike were afọ iri ọzọ rute ebe ahụ, mana anyị enweghị obi abụọ na anyị na-aga. Ngwongwo dijitalụ anyị na-akwado ihe karịrị mmadụ iri na abụọ - nke ahụ na-eto eto.
Tags: netwọk mgbasaAdSensenetwọk mgbasa oziAdWordsMgbakwunyenjikọ mmekọMgbakwunye revenuenyochaihemmetụtammetụta ahịamee ka ego onlineMgbakọ Ahịamonetizationnyochaa blog gịmonetize gị Podcastmonetize gị videoegoakwụ ụgwọ njikọnkwalite ngwaahịaNtuziaka ụgwọreferralsree ngalaba gịree saịtị gịnkwadonlele
Ihe Mere I Ji Kwuru Okpokoro Igwe Mbuli gị
Jan 16, 2017 na 8: 28 AM
Ndị a bụ ọtụtụ ụzọ ziri ezi maka monetization nke okporo ụzọ na-eweta ọdịnaya weebụsaịtị, ọ bụrụ na ị nwere otu. Enwekwara oke na, na ihe egwu dị, n'ụdị ụfọdụ nke usoro ego, dịka n'ihe gbasara mgbasa ozi PPC na njikọ akwụ ụgwọ, dịka akọwara. A na-arụ nnukwu ọrụ na iweta ahụmịhe gị niile na njikwa gị iji dee akwụkwọ a. :)
Jan 16, 2017 na 11: 32 AM
Daalụ nke ukwuu, Bet!